အသင်းအဓိကကစားသမားတွေထက် မိမိတို့ဒုတိယကစားသမားတွေကပိုစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ဟု ဗန်ဒါဘတ်ပြော – FBV SPORT NEWS
အသင်းအဓိကကစားသမားတွေထက် မိမိတို့ဒုတိယကစားသမားတွေကပိုစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ဟု ဗန်ဒါဘတ်ပြော
ယူနိက်တက်အဓိကကစားသမားတွေထက် မိမိတို့ဒုတိယကစားသမားတွေကပိုစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ဟု ဗန်ဒါဘတ်ပြော
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ FA CUP ပွဲစဉ်အဖြစ် ဝက်ဖို့စ်အသင်းအား အိမ်ကွင်း အိုးထရက်စဖို့စ်မှာ လက်ခံကစားခဲ့ရမှာ 1-0 ဖြင့်အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်..
ယင်းပွဲမှာ ဆိုးရှားလ်ဟာ ကားရစ်ပြောထားတဲ့ စကားအတိုင်း ပုံစံအသစ် လူငယ်ကစားသမားတွေနဲ့ချည်း ပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်..
၄-၂-၃-၁ ကစားကွက်နဲ့ အတူ ဂိုးသမား ဟန်ဒါဆန် နောက်တန်းမှာ ဘိုင်လီ၊တွမ်ဇီဘီ၊ဝီလျံ၊အဲလက်တဲစ် ….ကွင်းလယ်မှာ တော်မီနေး ဗန်ဒါဘတ် ဂျိမ်မ်း လင်ဂတ် မာတာတို့နဲ့အတူ တိုက်စစ်မှာ ဂရင်းဝုဒ်ကိုထားခဲ့ပါတယ်..
ယင်းပွဲမှာ ဗန်ဒါဘတ်က လူငယ်ကစားသမားနဲ့ မိမိတို့ အစုအဖွဲ့ က အဓိကကစားသမားတွေထက်ပိုပြီး စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ကြောင်း ယခုလိုပြောထားပါတယ်….
ဗန်ဒါဘတ်က ” အခုဒီပွဲကို ယုံကြည်စွာ ကစားခွင့်ပေးတဲ့ ဆိုးရှားလ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်….ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်တောင် ယုံကြည်မှုပျောက်နေခဲ့တယ်..အသင်းနဲ့အံဝင်ပါ့မလားဆိုတဲ့ အတွေးတွေဝင်ခဲ့မိတယ်……
ယခုပွဲက ကစားသမားတွေအားလုံးကို အဓိကကစားသမားတွေမဟုတ်ကျပါဘူး….လက်ထောက်နည်းပြ ကားရစ်က FA Cup အတွက် Line Up လုပ်သင့်တယ်လို့အကြံပေးခဲ့လို့ လူငယ်ကစားသမားတချို့ ဒီပွဲကို ကစားခွင့်ရပြီး ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့ကြတာပါ…..
ဒီနေ့ပွဲမှာ လင်ဂတ် တော်မီနေး ဂျိမ်း ဘိုင်လီ တွမ်ဇီဘီ တို့ဟာ လျင်မြန်တဲ့နှုန်းတွေနဲ့ လုပ်ရှားခဲ့ကျပြီး အသင်းရဲ့ အဓိကကစားသမားတွေထက်ပိုပြီးတော့ လျင်မြန်တဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုပြသခဲ့ကြတယ်…ယူနိက်တက်ရဲ့ဒီလိုကစားသမားတွေနဲ့တွဲကစားခွင့်ရတာ ကျေနပ်မိပါတယ်….
နောက်ပွဲတွေမှာလည်း ခြေစွမ်းပြပြီးပွဲထွက်ကစားခွင့်အပြည့်ရဖို့ ကြိုးစားသွားပါအုံးမယ် ….ကွင်းလယ်မှာလည်း တချိန်က နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ပေါစခိုးလ် နဲ့ ဂစ်တို့လို နေရာရောက်အောင် အားစိုက်ထုတ်သွားမယ်ဆိုပြီး ” Sport Tribble News မှာ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်..
Rkar(FBV Sport News)